Chocolate Lab Breed Profile, Obi, Health & Agba iche - Reeddịrị
Chocolate Lab Breed Profile, Obi, Health & Agba iche
Chocolate Labs bụ otu n'ime ụdị atọ nke Labrador Retriever agba dị iche iche.
Labrador Retrievers bụ ndị a na-ahụkarị dịka ụdị nkịta kachasị ewu ewu ma nwee ike ịbụ chocolate, odo ma ọ bụ oji .
E bu ụzọ wepụta ndị na-ewepụta azụ ihe iji nyere ndị ọkụ azụ aka ịba ụgbụ ma weghachite ọbọgwụ. Ọ dị nwute na narị afọ nke 20, a na-ezere labradors chọkọleti iji kwado nwa ojii.
N'agbanyeghị afọ nke nhọrọ ozuzu na aja aja site n'usoro ọbọhọ. Taa ọtụtụ ndị nwe ha hụrụ agba agba miri emi dị omimi nke nkịta a.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụ ihe dị iche banyere ndị na-ewepụta agba agba chocolate, ọ bụrụ na ha dị mma dị ka Labradors ndị ọzọ na ọnọdụ ha wee gụọ na ...
Nnyocha nyocha Chocolate
Ihe mere anyi ji hu Chocolate Labrador
Ego ole bụ nkịta ụlọ chọkọletị?
Chocolate Labrador Agba
Olee Nnukwu Doeslọ Ọrụ Chocolate Na-enweta?
Chocolate Labs Ọnọdụ
Lablọ nyocha Chocolate Ha Na-eme Ihe Ike?
Lablọ nyocha Chocolate Ezigbo Ezigbo Ezinaụlọ?
Lablọ nyocha Chocolate Ahụ Ike?
Nlekọta nlekọta (roomgba akwụkwọ, Nri & Mmega)
Ndu Ndu ono
Colatelọ nyocha Chocolate Dị Amamịghe?
Chocolate Labradors bụ mgbanwe dị iche iche nke Labrador Retriever.
N'agbanyeghị Slọ nyocha na-ewu ewu maka ọtụtụ narị afọ 20, ọ bụghị ruo mgbe 1960 ka ndị mmadụ ghọtara ịma mma nke agba aja aja. Tupu nke a, ndị dinta na ndị ọkụ azụ nwere nnukwu mmasị na oji maka ikike ha nwere ijikọ na gburugburu ebe obibi. A na-ahụcha agba odo na chocolate.
Chocolate Labs bụ yiri nnọọ ụmụnne ha ndị na-acha odo odo na nke ojii mana enwere ihere ole na ole na-aga n'ihu na-agba agba a.
Ọtụtụ kwenyere na Labradors nwere agba chocolate dị obere karịa.
Nke a abụghị eziokwu ma na-esite n'echiche bụ na ndị na-azụ anụ na-eri naanị maka agba aja aja ma na-eleghara agwa ndị ọzọ anya dị ka ọgụgụ isi na ịzụ ahịa.
Otu akụkọ ifo nke bụ eziokwu bụ na ahụ esighị ha ike.
Maka na ha pere mpe karịa ụmụnne odo ma ọ bụ oji, ha nwere ọdọ mmiri pere mpe. Nke a na - akpata obere mkpụrụ ndụ ihe nketa ma belata afọ ndụ ha site na afọ 2 ruo nkezi nke afọ 10.
N'ime oge 1500 ndị ọkụ azụ si Newfoundland chọrọ nkịta na-arụsi ọrụ ike nke nwere ike iguzogide ajọ oyi nke Canada.
A na-azụ ụmụ nkịta mmiri na Newfoundland Dogs iji mepụta Nkịta Mmiri St John.
Narị afọ atọ ka nke ahụ gasịrị, achọpụtara Nkịta Mmiri nke John John site na ịga na ndị isi Bekee. O juru ndị isi ahụ anya na mmụọ ọrụ nkịta na ụkpụrụ ọrụ ya wee webata ha na England ngwa ngwa.
Ha na - ahọrọ nkịta a ka ọ gbaa egwuregwu ma kpọọ ha Labrador Retriever.
Ebe ọ bụ na ha mere mbụ na United States na 1900s labs chocolate labs ghọọ onye a ma ama .
Labradors na-ewu ewu n'ihi na ha nwere mmekọrịta enyi na enyi, ọ dị mfe ịzụ, na-adabara ọtụtụ ndị nwe ya. Naanị ndị nwere ike ịbụ okenye ma ọ bụ ndị na-adịghị ejekwa ozi n'ihi mmega ahụ mmega ahụ.
Clublọ ọrụ ụlọ mkpo mbụ iji mata Labrador Retrievers bụ English Kennel Club na 1903. Kenlọ American Kennel debara aha ụlọ nyocha mbụ ha na 1917. Klọb abụọ ahụ jikọtara ha dị ka nkịta egwuregwu na-ajụ.
Ha na-abụ ezigbo nkịta ezinụlọ mana ha bụkwa ndị ezigbo ịchụ nta. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime isi ihe kpatara eji eme ka ha hụ n'anya nke ukwuu:
Ha dị ezigbo mma ma bụrụ ndị ọ bụla ha hụrụ.
Slọ nyocha nwere ọgụgụ isi ma nwee ike zụọ ya ịrụ ọtụtụ ọrụ.
Labrador Retrievers dị ezigbo mma ma kenye ha ọtụtụ ọrụ dịka nkịta ọrụ ma ọ bụ nnapụta.
Egwuregwu ha na ịdị nwayọọ ha mere ka ha bụrụ ezigbo enyi maka ụmụaka.
Ha dị ike ma ga-enwe njem ịgba egwu, igwu mmiri ma ọ bụ igwu egwu.
55 ka 80 pound
21.5 - 24.5 sentimita asatọ
10 ruo 12 afọ
Chocolate Labrador puppy a mụrụ aja aja ma nọrọ otu agba ka ha dị afọ.
Puppy puppy ga-enwe mmekọrịta na ọchịchọ ịmata ihe. N’anụ ahụ, ha kwesiri ịdị ka ndị siri ike ma na-eriju afọ.
Lablọ nyocha Chocolate na-enwekarị ahụike ahụike karịa ụmụnne ha ndị na-acha odo odo ma ọ bụ ojii. Ọ bụ ya mere dị ezigbo mkpa ịchọta a breeder breed .
E kwesịrị izere ndị na-azụ azụ na ụlọ ahịa anụ ụlọ. Ha nwere ike iyi ka ọ dị ọnụ ala karịa ịzụta mana mana ị nwere ike ịkwụsị ịkwụkwu ụgwọ ụgwọ ụmụ obere anụ na ogologo oge.
Ozugbo ị chọtara onye na-azụ ya, gbaa mbọ jụọ ndị nne na nna:
Ha gosipụtara nchegbu ọ bụla banyere mkpụrụ ndụ ihe nketa?
Olee otú àgwà ha dị?
Gịnị mere e ji họrọ ha maka ozuzu?
Atụla ụjọ ịjụ ịhụ akwụkwọ ahụike na asambodo.
.B. onye na-azụ ihe ga-enwe ike inye gị ezigbo ihe akaebe na nkịta gị na nne na nna ya nọ na ahụike. Nke a ga-ebelata ohere nkịta gị ịnwe nsogbu ahụike.
Chocolate Labs bụ rere $ 800 - $ 1,200 . Ndị nkịta dị oke ọnụ sitere na ngosi ma ọ bụ ọbara na-arụ ọrụ. Onu ogugu ohia bu umu nkita ise rue iri.
Ozugbo ị bulie nwa nkita, dị njikere ichere ruo mgbe o toruru ịhapụ mama. Ndị na-azụ anụ nwere ọrụ adịghị ekwe ka ụmụ nkịta ha pụọ ​​ruo mgbe ha dị izu asatọ .
Họrọ nwa nkịta chọkọletị esighi ike ka ha niile yiri.
Isi okwu gi kwesiri ibu na aru ike ha.
Nke mbu, nwa nkita a na-ele anya ma na-aru aru?
Nke abuo, olee ụdị nkịta ị ga-achọ ịkpọbata n'ụlọ gị?
O di nwute na o bu ihe ndi ozo na choko chocolate na-eme ulo ha.
A maara ha na ha na-arịa ọrịa ahụike na-eme ka ndị nwe ha hapụ nkịta ha.
N'ịnabata agadi nkịta bụ ihe ịtụnanya na-eme ka ọtụtụ nkịta dị mma nwee ohere nke abụọ.
Organizationsfọdụ òtù ndị na-elekwasị anya na nnapụta na ịlọgharị ụlọ nyocha gụnyere: Lab Rescue LRCP, Midwest Labrador Retriever Rescue na Golden Gate Labrador Retriever Rescue.
Chocolate Labradors dị agba aja aja mara mma . Ọtụtụ bụ agba aja aja siri ike na-enweghị usoro ọ bụla.
Mgbe ụfọdụ, ụlọ nyocha Silver na-enwe mgbagwoju anya maka ọdịiche a mana ha bụ oyi oyi diluted ndo .
Bredị a na-ejedebe na agba aja aja bara ụba. Ọtụtụ ndị mmadụ na-amata ụlọ nyocha Silver dị ka iche iche dị iche iche dị ka agba ha anaghị adị ọkụ.
Uwe ha kwesịrị ịdị mkpụmkpụ ma kwụ ọtọ. A na-anabatakwa obere ikuku na azụ.
Ha nwere ajị anụ dị oke mkpa nke nwere mkpuchi dị nro na-echebe ha pụọ ​​na oyi.
Labradors bụ nkịta buru ibu buru ibu na floppy ntị na isi na-adịghị mma. Ahụike chocolate retrievers tụbara 55 - 80 pound ma jiri 21.5 ruo 24.5 sentimita too ogologo.
Ndị na - ewepụta ihe dị ọcha niile yiri nnọọ - naanị ihe dị iche bụ agba uwe ha.
Labradors dị mfe nghọta site na uwe mkpụmkpụ na-acha otu otu, gbam gbam ma sie ike.
Ha ka nwere aru ahu aru site na oru ha gara aga nke mere ka ha bulie ozigbo n’enweghị nsogbu.
A na-eji aka ha eme ihe ha nwere ọzoo otiti nke ahụ na-enyere ha aka igwu mmiri.
Nnọọ nnukwu anụ oriri
Ike mgbe niile
Labrador Retrievers bụ otu n'ime ụdị nkịta na-atọ ụtọ.
Ha bụ incredibly enyi na enyi kwupụta ma mmadụ na anụmanụ . Nkịta ndị a nwere obi ike n’ihe niile ha na-eme.
Iguzosi ike n'ihe ha na-eme ka ha chọọ ichebe ezinụlọ ha, ọfụma ha na-egbochi ha ịbụ ezigbo nkịta na-eche nche - ha dị oke mma maka ọrụ ahụ!
Chụ nta dị n'ọbara ha ka ha nwee nnukwu anụ oriri. Enwere ike ijikwa ọzụzụ a na ọzụzụ mana ị ka ga-achọ itinye ego na ọtụtụ ncheta ọzụzụ. N'ikpeazụ, ụlọ nyocha chocolate anaghị agbasi ike ma ọ bụrụ na ha anaghị ewepụta ume.
Otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara ha ji ewu ewu n'etiti ndị hụrụ nkịta n'anya bụ n'ihi na ha dị mma.
Ha ọkọlọtọ izu na-akọwa ha dị ka ndị na-arụsi ọrụ ike, ndị enyi na ndị na-apụ apụ.
Ha na-enwe ike imeta onye ọ bụla enyi na nkịta dị ịtụnanya maka ezinụlọ. Labradors nwere mmasị igwu egwu ma soro ụmụaka ma ọ bụ nkịta ndị ọzọ nwee nnukwu egwuregwu.
Bredị a na-anụ ọkụ n'obi ime ihe na-atọ ụtọ. Ha hụrụ ndị nwe ha n’anya ma na-achọ mgbe niile ime ka ha nwee obi ụtọ.
N'adịghị ka nkịta ndị ọzọ nwere ike ịbụ kuziiri itughari ma ọ bụ kpọọ ndị nwụrụ anwụ, a pụrụ ịzụ ụlọ nyocha iji rụọ ọrụ n'ezie.
Site n'inwe mmetụta dị ịtụnanya nke isi na ntụkwasị obi, a maara ụdị a maka ịbụ otu n'ime ụdị nkịta nkịta kachasị mma. Nkịta ndị a na-emekwa nkịta ndị na-atụkwasị obi, ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị nwere ezi mmụọ.
Iwe abụghị ihe ị ga - eche maka mgbe ị nwere Labrador.
Ha dị oke ndidi ma dịkwa nwayọ nke ukwuu ga-ata aru dika ihe ikpe-azu . N’ebe dị ala, nke a pụtara na ha nwere ike bụrụ enyi onye ohi karịa ịnwa ime ka ha pụọ.
Ha nwere ike ịgbọ ụfụ.
Barklọ nyocha na-agba ụja maka ọtụtụ ebumnuche:
Iji mee ka ndị nwe ha mata ihe ụfọdụ.
Igosiputa obi uto ha ma obu obi ha.
Ọ bụrụ na nkịta gị daa ụda nke ukwuu, ọ bụkarị n'ihi na ha na-agwụ ike ma chọọ ihe ndọpụ uche. Idebe ha obi uto ga-egbochi ogbugbo nsogbu.
Ee! Kidsmụaka na Chocolate Labrador Retrievers na-agakọ. Ndị nọ n'afọ iri na ụma hụrụ n'anya ka nkịta ndị a si adị mfe ma were ha dika ezigbo enyi.
Shouldmụntakịrị ka a ga-elekọta. Nkịta ndị a nwere ike nwetụ obi ụtọ mgbe ha na-egwu egwu ma nwee ike ịkụtu obere nwatakịrị na mberede.
Ọ bụ ezie na nkịta ndị a nwere ndidi ma nwee ezigbo mmụọ, ha na-arụsi ọrụ ike.
Nke a na-eme ka ha ghara ịdị na-adabara ndị agadi dịka ha nwere ike ịchọ mmega ahụ karịa okenye nwere ike inye. Ndị agadi kwesịrị ịtụle ịnakwere ụlọ nyocha ochie nke nwere ike ọ gaghị adị mkpa mmega ahụ dịka nkịta.
Slọ nyocha ga-abụ ezigbo enyi na ndị ọbịa, nkịta ndị ọzọ na anụ ụlọ na ụlọ.
O di nwute na Chocolate Retrievers na-ebi ndu dị mkpụmkpụ karịa ụmụnne ha ndị na-acha odo odo ma ọ bụ ojii.
Afọ etiti maka nwa ojii ma ọ bụ odo Labradors bụ afọ iri na abụọ. Ọ bụ naanị afọ 10 maka labs brown.
Iji nyere ha aka ibi ndụ dị mma, isi ihe ị ga - eme bụ izere oke ibu. Inye nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ zuru oke bụkwa isi ihe.
Ọtụtụ nkịta dị ọcha nwere ihe ize ndụ nke iketa ọnọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa. Bslọ nyocha chọkọletị nọ n'ihe ize ndụ nke nsogbu ahụike mkpụrụ ndụ ihe nketa n'ihi na ha nwere ọdọ mmiri pere mpe na na-abụkarị ụmụ nje .
Nsogbu ụfọdụ gụnyere ọrịa ntị na anụ.
Ha nwekwara ike keta nkwonkwo nkwonkwo dịka ọrịa ogbu na nkwonkwo a na-enweghị ọgwụgwọ ọ bụla.
Fọdụ nsogbu ahụike ndị ọzọ metụtara Labradors gụnyere hip ma ọ bụ ikpere ikpere, dysplasia laryngeal, hypothyroidism na cancer.
Ihe kachasị mkpa ị nwere ike ime bụ ịchọta ezigbo onye na-azụ ihe ma rịọ maka akwụkwọ nyocha ahụike.
Wantchọrọ ijide n’aka na nne na nna nwa nkịta ahụ nwere ezigbo ahụike iji belata ihe ize ndụ nke ịzụta nwa nkịta na-adịghị mma.
Chocolate Labs abụghị akwa mmezi onu . Ha dị mfe ilekọta site na ndị nwe oge mbụ. Ha choro onye nwe ha ga-eji ihunanya gosi ha ịhụnanya ma jidesie ya ike n'ihe gbasara ọzụzụ na nri na-edozi ahụ.
Onye ọ bụla nwere ọrụ ruru eru nwere nkịta aja aja a.
Labrador nwere ike ịbụ nnukwu mgbakwunye n'ụlọ ọ bụla ( ya bu ulo ma obu ulo ).
Nduzi ~ Calorie 1,500
Ebe ọ bụ na ha bụ ìgwè na-arụsi ọrụ ike, nri ha kwesịrị ịba ụba na abụba na obere protein.
Na nri kacha mma maka ụlọ nyocha bụ nke a na-emepụtara maka nnukwu udiri anumanu.
Nkịta ndị a na-erikarị nri. Gluttony nwere ike ịbụ nsogbu maka Labradors ka ekwesịrị iji nlezianya nyochaa ibu ha.
Nri a tụrụ aro maka ụlọ ọrụ Chocolate bụ iko abụọ nke kibble n’ụtụtụ na otu n’anyasị .
Omume kwa ụbọchị
Nkeji Nkeji 120
Mmega Ahụkarị Igwu
Chocolate Labradors dị oke egwu, dị ike ma na-arụ ọrụ.
Nkịta ndị a ga-ekpori ndụ ime ihe ọ bụla na ndị nwe ha.
Enwere ike iji mmemme dị iche iche nabata ha dịka ịgba ọsọ, iweta ma ọ bụ igwu mmiri. I nwekwara ike iwere ha maka njem, mmiri mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ike agwụ ha, ha nwere ike wepụta ike ha ji etinye ego ha n’ihe niile dị n’ụlọ ma ọ bụ malite ịgbọ ụja .
Kwesịrị ịga ije na ụlọ nyocha gị ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'ụbọchị, mana ịga naanị ya agaghị emeju ogo ogo ha. Ha chọrọ ma ọ dịkarịa ala na-emega ahụ awa abụọ kwa ụbọchị.
Ọrụ siri ike nke ejiri egwuregwu butere ha ga-ezute mkpa mmega ahụ ha.
Labradors dị ka enyi na enyi, nwee mmekọrịta enyi na amamihe.
Nkịta ndị a na-achọ ịmụ ihe, a ga-azụkwa ha ngwa ngwa.
Nwere ike ịhọrọ ịchọta onye nkịta nkịta ma nke a adịghị mkpa. Ga-enwe ike ịzụ nkịta gị.
Nkwado dị mma bụ usoro kachasị mma maka ọzụzụ.
Ị kwesịrị na-akpakọrịta ha kwupụta ụmụaka na anụ ụlọ ndị ọzọ. Ozugbo etinyere oke, ha ga-amata kpọmkwem ụdị agwa ndị a na-anabata na ndị anaghị anabata.
Lablọ nyocha Chocolate bụ nhọrọ zuru oke maka ọtụtụ. Labradors bụ nkịta kachasị amasị America maka afọ iri abụọ. Site na nnukwu ezinụlọ, nye ndị nwe ụlọ na-alụghị di na-achọ nkwado mmụọ, nkịta ndị a nwere ike ịbụ ezigbo ezigbo enyi ha.
Chocolate Labradors nwere karịsịa ọmarịcha ejiji na uwe mwụda ha na-acha aja aja .
Tupu ịmalite ịmalite ijide n'aka na ị dị njikere inye ha ọtụtụ mmega ahụ na nlekọta ahụ ike.
Ọ bụrụ na ụdị a abụghị ihe kwesịrị ekwesị maka gị, ị nwere ike ịchọ inyocha ụmụnne ha odo ma ọ bụ ojii. Ọ fọrọ nke nta ka ha yie otu mana ha maara na ahụike siri ike. Ọzọ ọzọ ọzọ bụ ndị Goldenghachi .
Ka anyị mara ihe ị na-eche banyere nke a magburu onwe enyi n'okpuru.
Gịnị Mere Nkịta Ji Rọ Unyi? Ọ Dị Njọ nye Ha?
Husky Malamute Mix: Alusky a bụ ezigbo anụ ụlọ?
ogologo ntutu chihuahua na ngwakọta pomeranian
nwa nkịta bulldog blue na -efu
Havanese poodle mix zuru oke